संशोधनबारे के भन्छन् लेखक तथा बाम बुद्धिजीवी ? संग्रौला, पिटर र पाठकको ठेट कुरा - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
संशोधनबारे के भन्छन् लेखक तथा बाम बुद्धिजीवी ? संग्रौला, पिटर र पाठकको ठेट कुरा
मंसिर १९ गते, २०७३ - ०९:५८
काठमाडौं, १९ मंसिर । सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै मंगलबार साँझ संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रस्तावको सदन र सडकबाट विरोध गरिरहेको छ ।
एमालेले गरेको विरोधमा मजदुर किसान पार्टी, जनमोर्चा लगायतका दलहरु तथा ५ नम्बर प्रदेशका ब्यापारीहरुको संलग्नता देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा दोश्रो ठूलो दल एमालेले विहीबारदेखि लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सो दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव सभामुखले पढेर सुनाउने र लोकमान विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल गर्ने लगायतको कार्यसुचि रहेको थियो ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलीय जिम्मेवारी र राष्टिय दायित्वप्रति ध्यान नदिएका कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुन पुगेको बुद्धिजीवीहरुको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय आवश्यकता, देश र जनताको बारेमा भन्दा पनि दलीय स्वार्थबाट अघि बढ्न खोजेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बुद्धिजीवीहरु भन्छन्–‘संविधान प्रति असन्तुष्ट पक्षको मागलाई पनि संविधानमा समेट्दै मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण निमार्ण गर्नु आवश्यक छ । संविधान संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो । यसको विरोध होइन मिलेर सहमतिको बाटोमा सबै दलहरु लाग्नुको विकल्प छैन ।’
मंसिर १९ गते, २०७३ - ०९:५८ मा प्रकाशित
संशोधनको विरोध नाजायज, मधेसको संवेनशिलतालाई ध्यान दिनुपर्दछ
संशोधनको प्रस्ताव सरकारले अघि बढाउनु आवश्यक नै थियो । यसअघिको सरकारले संशोधनको प्रस्तावबारे गरेको तयारीलाई यो सरकारले अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ । अहिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असन्तुष्ट पक्षका मागहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
संविधान संशोधन बिना संविधानको कार्यान्वयन सम्भव देखिन्न । मुलुकमा निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि संशोधन आवश्यक छ । यसमा प्रमुख ठूला दलहरुले समहति जुटाएर अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो तर दलहरु राष्ट्रको आवश्यकता प्रति जिम्मेवार भएको देखिएन । दलहरु आ आफ्नो दलिय स्वार्थलाई छोडेर राष्ट्रियताको विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ ।
दलहरुले संशोधनको विषयमा विरोध गर्नु जायज हुदैन, उनीहरुले मधेसको संवेनशिलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ । भावना, प्रतिरोध वा उत्तेजनाले जिम्मेवार दलको कार्यशैलीमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ । एमालले बुझ्नुपर्ने विषय संशोधनको प्रस्तावसँगै निर्वाचनको कुरा जोडिएको छ । तसर्थ असन्तुष्ट पक्षहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्दै चुनावी माहोल निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसको विरोध गरेर सडक र सदन अबरुद्ध गर्नु उचित देखिन्न । आन्दोनल अराजकतातिर गएमा एमालेको लोकप्रियता समेत घट्न सक्छ, यो कुरा उसले बुझ्नु पर्दछ ।
अहिले दलहरुको बीचमा सहमतिको अभ्यास भएको देखिन्न । शान्तिप्रकृया निमार्णको संन्र्दभमा जसरी दलहरुबीच सहमति र एकमत बनेको थियो त्यो हुन नसक्नु र आ आफ्नो दलिय स्वार्थबाट दलहरु प्रभावित हुनु नै समस्याको मुख्य कारण हो ।
मलाइ लाग्छ सरकारले पनि आफ्नो प्रवृतिमा परिर्वतन गर्नुपर्दछ । दलहरुले आग्रह वा पूर्वाग्रह छाडेर सहमतिको सिद्धान्तबाट अघि बढ्नुको अरु विकल्प छैन । देशलाई निकास र स्थायि शान्ति चाहिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले चुनावी माहोलमा बन्द हड्ताल नगर्ने भनि गरेको घोषणा लाई कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । आवेगमा आएर आफ्ना मुल्य मानयता र राष्ट्रिय जिम्मेवारीलाई बिर्सनु हँुदैन । अहिले एमालेले सत्ताबाट बाहिर निस्कदाको पिडा वा आवेग सडक बाट पोखेको जस्तो देखिएको छ,उनीहरुले सभ्यता पूर्वक जिम्मेवार दलको भूमिका पूरा गर्नु पर्दछ ।
असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउन संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विगतमा केपी ओली सरकारले पनि संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । पहिलेको सरकारले अघिसारेको प्रस्तावलाई नै अहिले अघि बढाइएको जस्तो देखिन्छ । असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेत राष्ट्रिय मुलधारमा ल्याउँदै संविधान संशोधन गरेर मुलुकमा स्थायी शान्ति, विकास र संमृद्धिको दिशामा लैजानु पर्दछ । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन, तीन तहको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्दछ । संविधान संशोधन अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
अखण्ड प्रदेश, राज्य वा जिल्लाको विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्नु उचित देखिन्न । अखण्ड भनेको राष्ट्र मात्र हुन्छ । मुलुक पुरानो संरचनाबाट नयाँ संघीयताको ढाँचामा जाने क्रममा यो जिल्ला वा यो क्षेत्र अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने कुरा तार्किक हँुदैन । संघीयताको सिद्धान्त नै नयाँ आधारमा प्रदेश बनाउने हो, तसर्थ प्रदेशको सीमाना तल माथी जान पनि सक्छ,त्यसको विरोधमा अराजकता निम्त्याउनु पुरातनवादी सोँच हो । हाम्रो अगाडि पुराना संरचना भत्काउदै नयाँ संघीय मुलुक बनाउन पर्ने कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ, यसबाट जनताप्रति जिम्मेवार राजनीतीक दलहरु भाग्न पाउँदैनन् ।